C/raxmaan C/shakuur oo dhaleeceyn dusha kaga tuuray dowladda madaxweyne Farmaajo – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
C/raxmaan C/shakuur oo dhaleeceyn dusha kaga tuuray dowladda madaxweyne Farmaajo
C/raxmaan C/shakuur Warsame oo ka mid ahaa musharixiinta ku tartameeysay doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa qoraal kooban uusoo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in dowladda uu hogaaminaayo madaxweyne Farmaajo ay tahay mid aad u liidata islamarkaana ku tiirsan dalal shisheeye.
Qoraalka C/raxmaan C/shakuur Warsame oo u muuqda mid uu ku weeraraayo dowladda uu hogaaminaayo madaxweyne Farmaajo ayaa hore usoo noqday wasiirka qorsheynta dowladii KMG ahayd ee Soomaaliya
“Si daacad ah hadii aa u hadlo dowladeenu waxay sii noqoneysaa mid taag darran oo si weyn ugu xiran taageerada dibadda, taasoo sii xoojineysa ku tiirsanaan meesha ka saareysa isku tashiga..” Sidaas waxaa qoraalkiisa ku yiri C/raxmaan C/sharkuur Warsame.
C/raxmaan C/shakuur ayaa sidoo kale sheegay in taasi ay macnaheeda tahay in wadadii isla xisaabtanka ay noqoto mid u dhaxeeysa dowladda iyo deeq bixiyeyaasha, halkii la rabay shacabka, taas oo halis gelineysa sharcinimada dowladda haatan jirta.
Dhinaca kale, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa dhawaan sheegay in dowladda Sacuudiga ay bixineeyso dhaqaale lagu kabo miisaaniyadda dalka, waxaana sidoo kale midowga Yurub ay sheegeen inay bixinayaan mushaarka ciidamada booliska Soomaaliyeed.
Ugu dambeyntii, C/raxmaan C/shakuur ayaa ololihii uu ku galay doorashada madaxweynaha waxaa loogu magac daray ISKU TASHI, kaas oo ku dhisan dhaqaalaha dadka Soomaaliyeed, waxaana haatan muuqata in madaxweyne Farmaajo aanu lahayn aragti ku saabsan habeynta dhaqaalaha dowladda iyo canshuuraha kasoo xarooda dalka.